वनमन्त्रीको अक्सिजन अर्थ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फागुन २२, २०७७ शनिबार ९:१०:५६ | मिलन तिमिल्सिना
हँसाउने कलामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत दुई कदमपछि पारेर वनमन्त्रीले मच्चिँदै भने: 'हामी रुखलाई अक्सिजन दिन्छौँ रुखबाट कार्बनडाइअक्साइड पाउँछौँ ।'
वनमन्त्रीको नयाँ खोज र अनुसन्धान सुनेर सबै चकित परे । स्कुलमा विज्ञान विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थी र नासाका वैज्ञानिकसमेत अलमलिए । विद्यार्थीले हतारहतार किताब पल्टाए । नासाका वैज्ञानिकले मान्छे र रुखको श्वास निकालेर प्रयोगशालामा जाँच गरे । तर वनमन्त्रीको कुराले कसैगरी पनि मेल खाएन । मान्छेले रुखलाई कार्बनडाइअक्साइड दिने र रुखले मान्छेलाई अक्सिजन दिने पुरानो लेनदेन र मान्यतामा अझै यताउता नभएको तथ्य प्रयोगशालाबाट पुष्टि भयो । रुखलाई मान्छेले अक्सिजन दिने र मान्छेलाई रुखले कार्बनडाइअक्साइड दिने भन्ने वनमन्त्रीको कुरा मेल खाएन ।
त्यसो भए मन्त्रीजस्तो मान्छेले अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइड हावाको बारेमा हावा कुरा गरेका होलान् त ? धेरैले यस्तै सोचे । हावाबारेको मन्त्रीको कुरालाई हावामा उडाइदिए । कतिले त शिवरात्रि नआउँदै मन्त्रीले भाङ खाए कि भन्ने अन्दाज पनि लगाए ।
तर नासाका वैज्ञानिकलेसमेत प्रमाणित गर्न नसकेको मन्त्रीको भाषणमा अचम्मको सत्य लुकेर बसेको छ भन्ने कुरा धेरैले थाहा पाउन सकेनन् । ल सुन्नुहोस्, अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने वनमन्त्रीका असली कुरा ।
सबैलाई थाहा छ, अक्सिजन दिनु भनेको प्राण दिनु । ज्यान दिनु । जसलाई दिने हो उसको लागि मरिहत्ते गर्नु, उसलाई खुशी बनाउनु । उसलाई तलमाथि केही नहोस्, कसैले यताउति गर्न नपाओस् भनेर श्वास भर्नु ।
अहिलेसम्म रुखले मान्छेलाई अक्सिजन दिएर यही गुन लगाउँदै आएको हो । अनि मान्छेले पनि रुखलाई कार्बनडाइअक्साइइड दिएर हावाको बदलामा हावा दिएर गुन तिर्दै आएको छ । संसारका सबै मान्छे र रुखबीचको यो तालमेल र लेनदेन अझै कायम छ र भविष्यमा पनि रही नै रहनेछ । तर नेपालमा भने सरकारका मान्छेहरुलाई रुखसँगको यो तालमेल केही मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा यतिबेला रुखसँगको सिधा साइनो दुई थरीसँग छ । एउटा कांग्रेस, अर्को विप्लव । कसरी भनेर भन्नु नपर्ला । रुख कांग्रेसको चुनाव चिह्न, विप्लव रुखले ढाकिएको वनजङ्गलबाट भर्खरै सहर पसेका । अहिलेका प्रचण्ड, भट्टराई, वैद्य, बादलहरु पनि यसैगरी जङ्गलबाटै आएका हुन् । अहिले बादलबाहेक अरु तर्किएका छन् । बादललाई त जसोतसो आफैंसँग राख्न पाइएको छ । अहिले नजिक हुन खोजेका विप्लव पनि फेरि रुख भएको जङ्गल नै फर्कन्छु भनेर बटारिए भने प्रचण्डलाई के देखाएर तर्साउनु ? अनि रुखैरुख बोकेर दाउ हेरेर बसिरहेको कांग्रेस उतैतिर ढल्क्यो भने कुर्सी कसरी जोगाउनु ? त्यसैले सरकारका मान्छेहरुलाई हिजोआज रुखले बेलाबेला झस्काउँछ ।
कांग्रेसको रुखलाई आफ्नै आँखा अघिल्तिर राखेर हेरचाह गर्नुछ । रुखको बाटो हुँदै शहर पसेका विप्लवलाई पनि आफ्नो आसपासमै राख्नु छ । रुखको ठेक्का लिने काम वनमन्त्रीको हो। त्यसैले रुखलाई आफ्नो अक्सिजन दिएर भए पनि कुर्सी जोगाउनुपर्छ भन्दैछन् ।
हुन त रुखसँग साइनो भएको कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न नसकेर थकित भएका प्रचण्डहरु विप्लव सहर पसेपछि चकित भएका होलान् । भित्रभित्रै डाहा पनि लागेको होला । छटपटी भएको होला । तर डाहा गरेर के पो हुन्छ र मन जल्नु बाहेक ? मन हरियो पार्न कि त पोलिटिक्स, कि त ओलीटिक्स जान्नुपर्यो । पोलिटिक्स त अलिअलि सबैले जानेकै थिए । तर ओलीटिक्स त प्रचण्डले समेत बुझ्न सकेनन् ।ओलीटिक्समा मन्त्रीहरु बेलाबेला आफूले के बोलेँ भन्ने पनि आफैंले समेत पत्तो नपाउने गरी बोल्न सक्छन् ।मच्चीमच्ची भाषण ठोक्न सक्छन्। वनमन्त्रीको अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको खेल पनि यही हो । वनमन्त्रीको हावाबारेको यो भाषणलाई हावामा उडाउनु, खिसिटिउरी गर्नु भनेको कार्बनडाइअक्साइड लिएर अक्सिजन फाल्नुजस्तै हो ।
Mahesh Chandra Kaphle
March 6, 2021, 1:15 p.m.
वन मन्त्रीको भन्दा बढी अज्ञानता यो लेखको लेखकमा देखिएको छ । नासाले कैलेपनी रुख र मान्छे को अनुसन्धान गर्दैन । नासाले गर्ने भनेको अन्तरिक्ष को अनुसन्धान हो । अनि मन्त्री चिप्लिएकै हुन तर लेखक ले उल्लेख गरेजस्तो सधै रुख बिरुवाले सधै अक्सिजन फाल्ने पनि हैन । जतिबेला प्रकाश संलेषण (photosynthesis) हुन्छ त्यो बेला मात्र रुख बिरुवाले अक्सिजन फाल्ने हो नत्र श्वास प्रश्वास को बेला त बिरुवले पनि मान्छे र अरु जनावर जस्तै अक्सिजन लिने र कार्बनडाइअक्साइड फाल्ने गर्छ । कुनै पनि बिषयमा लेख लेख्नु भन्दा अगाडी त्यस्को बारेमा अलिकती अध्ययनको आबश्यकता चै रहन्छ
March 7, 2021, 11:45 a.m.
अल्पज्ञानलाई धेरै जानेजस्तो नगर्नू नि ! कुल मिलाएर बनस्पतिले मान्छेलाई अक्सिजन दिने नै हो, मान्छेबाट लिने होइन ! श्वास-प्रश्वास, जुन मुख्यरुपमा राति हुन्छ, मा बनस्पतिले अत्यन्त थोरै मात्रामा अक्सिजन लिने र अत्यन्त थोरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्छ, त्यो अति थोरै हुन्छ, अर्को शब्दमा बनस्पतिले फोटोसिन्थेसिस मार्फत फाल्ने अक्सिजन कैयौं गुणा बढी हुन्छ बनस्पतिले श्वास-प्रश्वास मार्फत लिने अक्सिजन भन्दा ! अनि बनस्पतिले मान्छेलाई अक्सिजन दिएको भयो कि लिएको भयो त? तपाईले हजार रुपिया लिनुभयो, एक रुपिया अर्कोलाई दिनुभयो ! तपाइले लिएको धेरै भयो कि दिएको धेरै भयो? त्यसैले तपाइको र मन्त्रीको होइन, लेखककै भनाइ संग सहमत म चाहिं !